Muhaajiriin ku dhimatay xeebaha Taliyaaniga - BBC News Somali
Ugu yaraan 100 muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka ka dib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay baddaasi.
Hay'adda dakhaatiirta an xudduda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in markabka ay leeyihiin uu soo badbaadiyay 27qof. Waxaa kale oo markabku uu soo saaray meydadka 7 qof.
Tan iyo maalintii Sabtida waxaa la soo badbaadiyay in ka badan 3 kun oo qof oo doonayay inay ka tallaabaan badda u dhexeysa Libya iyo Talyaaniga, balse ugu yaraan 3 boqol ayaa ku dhimatay badda todobaadkan.
Hay'ad gargaar oo lagu magacaabo MOAS ayaa sheegtay in laga yaabo inay tirada dhimashada intaa ka badan tahay, maadama an war badan laga hayn dooma ay saarnaayen muhaajiriin oo la aamin sanyahay inay ku dageen badda.